नवजीवन हस्पिटलमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु – Namaste Dainik
August 14, 2020 NamastedainikLeaveaComment on नवजीवन हस्पिटलमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु
जनकपुरधाम, ३० साउन । जनकपुरधामको एक अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको घटना नसेलाउँदै फेरी एक बिरामीको चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको छ । जनकपुरधामस्थित नवजीवन हस्पिटलमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको पीडित पक्षले आरोप लगाएका छन् ।
महोत्तरीको बलवा नगरपालिका वडा नम्बर ११ भगवतीपुरकी रुक्मिणी सदाको रक्षाबन्धन दिनदेखि पेटमा दर्द हुने, वान्ता आउने जस्ता समस्या शुरु भएको थियो । समस्या बढ्दै गएपछि उनलाई आइतबार जनकपुरधाम वडा नम्बर ९मा रहेको नवजिवन हस्पिटलमा उपचारका लागि ल्याएको उनको बुहारी शिवसति सदाले बताइन् । अस्पताल भर्ना गराउँदा पेटमा दर्द हुने समस्या थियो शिवसतिले भनिन् ‘ अस्पतालमा भर्ना गराएको ४ दिनसम्म चिकित्सकहरुले सामान्य उपचार गरिरहे, पछि शल्यक्रिय गर्नुपर्छ भनेपछि हामी आँत्तियौँ ।’
चिकित्सकहरुले ६ घण्टा लगाएर शल्यक्रिय गरे, तर पनि बाँच्ने अवस्था नदेखेपछि यहाँ यो बिरामीको उपचार सम्भव नरहेको भन्दै बाहिर लान भने शिवसत्तिले बताइन् । उनले भनिन् ‘हामी गरिब छौँ, कहाँ बाहिर लाने, फेरी यहाँ शल्यक्रिय भइसकेको छ, बाटोमा केही अप्रिय भइहाल्यो भने के गर्ने ? भने पछि चिकित्सकहरुले ६० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुस हामी बचाउने प्रयास गर्छौँ ।’त्यसकाे केही घण्टा नबित्दै आफ्नी सासुको मृत्यु भएको उनले दुखेसो पोखिन् । शिवसत्तिका अनुसार चिकित्सकहरुले उनलाई रुक्मिणीको आँत फसेको भनेका थिए, त्यसैले शल्यक्रिय गर्नुपर्यो ।
शिवसत्तिले भनिन् ‘शल्यक्रियपछि सासुको श्वास फुल्न थाल्यो, मैले नर्सलाई बोलाएँ, नर्सले उल्टै हामीलाई हप्कायो, नर्सले तपाईँको मात्रै बिरामी यहाँ छ कि अरु पनि छन् भन्दै हप्काए, पछि सासुले आँखा बन्द गर्न थालेपछि एक जना चिकित्सक आयो, स्लाइन पानीको बोतलमा कुनै सिरिन्ज लगाएपछि अचेत भइन्, पछि चिकित्सकहरुले भने तपाईँको बिरामी बिति सक्यो ।’
चिकित्सकहरुले शल्यक्रियभन्दा अगाडी बाहिर लान नभनेकाे र शल्यक्रियपछि अवस्था गम्भिर हुन थालेपछि मात्रै बाहिर लान भनेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
यता नवजीवन हस्पिटलका इन्चार्ज अखिलेश साहले बिरामीमा पेट दुख्ने, खाएको खाना नपच्ने, वान्ता हुने, पेट फुल्ने जस्ता समस्या देखेपछि सर्जन चिकित्सक संजय चौधरीको माध्यमबाट उपचार गराएको बताए । चिकित्सक चौधरीले यस्ता केशमा बिरामी आफै स्वस्थ भएर जाने समेत सम्भावना रहेको भनेपछि केही दिन औषधी चलाएरै हेरेको इन्चार्ज साहले बताए । त्यसपछि पनि सुधार नदेखिएपछि बिरामीको आफन्तजनको सहमतिमै शल्यक्रिय गरेकाे उनले दावी गरे ।
शल्यक्रिय गरेपछि गरिएपछि बिरामीको आँत पल्टिएको, गल ब्लडरमा क्यान्सर लागेको जस्तो देखिएको थियो उनले बताए । शल्यकृया पछि पनि हामीले बिरामीलाई बचाउने प्रयास गर्यौँ तर बिरामीलाई हामी बचाउन सकेनौँ । यस अघि बिहिबार राति ९ बजे तिर अस्पतालकै लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तजनले अस्पतालमा ढुंगामुढा गर्नुका साथै तोडफोड समेत गरेका थिए ।
डाँडो भासिएर बस्ती छोपेको लिदीमा अहिले घटनास्थलमा उद्धार र राहतलाई तीव्रता दिन भन्दै सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटासहितको टोली पुगेको छ ।
रौतहटमा सञ्चारकर्मी सहित थप २४ जनामा कोरोना संक्रमण
नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ कसले भनेको? गगनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ– मैले भनेको